Top 5 Free Android Photo Editor u Android Mobile Photo Faalladaada
> Resource > Free > Top 5 Free Android Photo Editor-Best Free Android Photo ayeey Apps
Qalabka Android helayso iyo aad u badan oo caan ah iyo baahida loo qabo barnaamijyadooda Android sii kordhaya. Wixii sawir ku caashaqay ka, tafatirayaasha sawir Android waa lagama maarmaan si ay u caawiyaan edit iyo retouch sawiro ku saabsan qalabka Android ku haboon.
Waxaa jira in badan oo kala duwan barnaamijyadooda tafatirka sawir android oo loo isticmaali karaa in lagu daro shidaalka in kaamirooyinka aad Android. Laakiin taas oo ka mid ah waa in aad doorato? Halkan ugu wanaagsan ee 5-ada tafatirka sawir Android oo lacag la'aan ah ku qoran yihiin si aad tixraac.
Just isticmaalaan tifaftirayaasha sawir lacag la'aan ah Android in aad retouch photos iyo dar dareen dheeraad ah iyo dhadhan in ay sawiro aad.
Free sawir Android editor 1: PicSay
Iyadoo PicSay, aad si xor ah ula qabsadaan karo midabka sawirkaaga, dhalaalka, iwm iyo koob oo dameer, naqshadeynta, stickers, saamaynta sawir gaar ah sida dhalanrog, iwm Waxaa la iman interface aad u dareen leh oo si sahlan loo isticmaalo. Tani editor sawir lacag la'aan ah Android waa mid aad muhiim u ah waxyaabaha lagu qoslo abuuro maxaa yeelay waxa ay bixisaa aad u dabacsan Word buufin (xumbo hadalka) qalabka.
Free sawir Android editor 2: FxCamera
FXCamera waa codsi ah oo lacag la'aan ah Android tafatirka sawir leh filtarrada kala duwan, saamaynta iyo goobaha badan oo in la beddelo habka ay sawiro aad jeceshahay. By isticmaalaya sida diirada kala duwan tahay, waxaad samayn kartaa sawiro farshaxanka ee qasabno!
Free sawir Android editor 3: Photoshop Express
Iyadoo Adobe Photoshop express, dadka isticmaala si xor ah edit karaa, dalagga iyo isku shaandheyn sawiro, sawir midab qabsato, iyo dar saamaynta farshaxanka in ay sawiro heerka ku xiga soo goobtii. Waxaad si fudud u wadaagi kartaa sawiro saxar iyo retouched qoyska iyo saaxiibada.
Free sawir Android editor 4: Rinjiga farta
Rinjiga farta asal ahaan waa version ah ee MS Rinjiga u Android. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad midabka iyo barbaro image ama ku darto midabka sanamyo na shiraac oo bannaan. Tani editor sawir Android oo lacag la'aan ah waxaa gaar ahaan jeclaa by dadka dhallinyarada ah.
Free editor sawir Android 5: Photo Funia
PhotoFunia waa aalad tafatirka sawir xiiso leh oo awood aad ku darto saamaynta sawir aad u qabow si ay sawiro aad. Iyadoo 150+ goobaha ay, waxaad ka dhigi kartaa wejigaaga on boor ah, stamp ah, ama in shaqo Warhol-sida ee pop-tahay. Tani Android app tafatirka sawir oo lacag la'aan ah ka heli doontaa dadka wajihi iyo geliso wejiga goobta aad dooratay. Waxoogaa xiiso leh sawir tafatirka app!